Ampiasao ny sary miaina OxygenOS 11 mivantana amin'ny finday Android | Androidsis
mandritra ny herinandro fampidinana mahafinaritra izay mitondra antsika mankany amin'ny 'Wallpaper Live' an'ny OxygenOS 11 Ary izahay dia misaotra an'ilay beta izay natomboka tato ho ato amin'ny OnePlus 8 sy OnePlus 8 Pro. Oh, ary azontsika ampiasaina amin'ny finday Android rehetra izany.
Raha ny fanazavana, a OxygenOS 11 izay nitondra izany traikefa maoderina izany miaraka amina endriny tsara amin'ny sasany amin'ireo habaka itsidihana azy indrindra rehefa mifandray amina sosona manokana; ary manatsara ny tanana iray aza. Saingy amin'ireo zava-baovao rehetra ireo dia tavela miaraka amin'ny Live Wallpaper azontsika ampiasaina isika.
Live Wallpaper miavaka amin'ny endrika geometrika mikotrana izay mihetsika mamokatra traikefa tsy manam-paharoa sy abstract ho lasa background ho an'ireo hitsin-dàlana, fampiharana ary widget izay apetrakay eo amin'ny birao.
Izahay dia eo alohan'ny apk ny Live Wallpaper an'ny OnePlus 8 sy OnePlus 8 ary mitondra antsika alohan'ireo sary mamoha sy manidy ireo sary ireo mba hanome izany fikitika manokana ny zavatra niainantsika izany. Toa izany miasa tanteraka amin'ny modely isan-karazany marika samy hafa, noho izany mamporisika anao izahay hanandrana azy:
marary mitsika: Wallpaper Live OxygenOS 11
Zava-mahaliana iray hafa momba ny endrika famolavolana an'ity Live Wallpaper ity dia ireo loko miova isan'andro, mba hahafahantsika mahatakatra fa tsy "manimba" be loatra ny baterian'ny finday Android io. Live Wallpaper izay tokony hiasa amin'ny finday Android 8.0 na avo kokoa. Ny zavatra tokana tokony hadino fa rehefa mampiasa OpenGL dia mety tsy mandeha amin'ny lafatra amin'ny finday sasany.
Mba hahafahana mankafy ny sary sokitra OxygenOS 11 tsy maintsy misafidy izany amin'ny mpisafidy vola ianao efijery amin'ny findainao aorian'ny fametrahana ny apk izay nomenay.
Fomba iray hafa hanatsarana ny traikefa an-tsary amin'ny finday Android ary izany dia ho mora ampiasaina ho antsika izay te hanana finday hafa noho ny hafa.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Tutorials » Ataovy miavaka ny Android » Sintomy ny 'Live Wallpaper' an'ny OxygenOS 11 amin'ny fitaovana Android rehetra
Ny atiny rehetra hofafantsika avy amin'ny Google Drive dia hofongorana ho azy afaka 30 andro